बढ्यो सुनको भाउ : कतिमा हुँदैछ आजको कारोबार ? - Babal Khabar
September 21, 2021 by बबाल खबर
अाजको सुनको मुल्य अघि बिनिमय दर हेर्नुस,
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि विदेशी मुद्राको विनियमदर तोक्दै अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आजका लागि अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य ११८.२८ र खरिद मूल्य ११७.६८ रुपैयाँ तोकेको छ । यसअघि, हिजो एक अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य ११७.८७ रुपैयाँ थियो ।
यस्तै, आज एक यूरोको बिक्री दर १३८.५१ र खरिद दर १३७.८१ तथा पाउण्डको बिक्री मूल्य १६१.९३ रुपैयाँ कायम हुँदा खरिद दर १६१.१० डलर तोकिएको छ । यसका साथै, अष्ट्रेलियन डलरको बिक्री दर ८५.६२ र खरिद दर ८५.१८ रुपैयाँ तोकिएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।
एसियन मुलुकतर्फ सिंगापुर डलरको बिक्री ८७.४८ र खरिद ८७.०४ रुपैयाँ, १० जापानी येनको बिक्री १०.८० र खरिद १०.७४ तथा चिनियाँ युवानको बिक्री १८.२९ मा हुँदा खरिद १८.२० रुपैयाँमा भइरहेको छ ।
यता साउदी रियालको बिक्री दर ३१.५४ र खरिद दर ३१.३८ तथा कतारी रियालको बिक्री ३२.४९ र खरिद ३२.३२ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसैगरी, संयुक्त अरब इमिरेट्सको बिक्री मूल्य ३२.२० रुपैयाँ तोकिँदा खरिद मूल्य ३२.०४ र मलेसियन रिंगटको बिक्री २८.२१ र खरिद २८.०७ रुपैयाँ कायम छ ।
यता आज मंगलबार नेपालको स्थानिय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला ३०० रुपैयाँले बढेको छ । हिजो सोमबार सुनको मूल्य एकै दिन प्रतितोला एक हजार रुपैयाँले घटेको थियो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज भने सुनको भाउ बढेको हो ।जसअनुसार, आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ८९ हजार २०० रुपैयाँ छ । यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ८८ हजार ७५० रुपैयाँ तोकिएको महासंघले बताएको छ ।
हिजो सोमबार एकै दिन तोलामा एक हजार रुपैयाँको गिरावटसँगै छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ८८ हजार ९०० र तेजाबी सुनको मूल्य ८८ हजार ४५० रुपैयाँमा आइपुगेको थियो । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५ रुपैयाँले बढेको महासंघले जनाएको छ । आज नेपाली बजारमा चाँदीको कारोबार प्रतितोला १ हजार १४० रुपैयाँमा भइरहेको महासंघले बताएको छ । साभार गरियको खबर
Prevअद्भुद क्षमतावान हुन्छन् यी ४ बार जन्मिने मानिस : तपाँर्इको कुन पर्यो ?
nextआजदेखि सोह्र श्राद्ध सुरु, के के गर्न हुँदैन ? कस्ले बार्ने ?